world bank(world bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाण्डौ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। यद्यपि सरकारले चालु आवमा नेपालले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको...
कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाललाई विश्व बैंकको थप सहयोग आवश्यक छ : अर्थमन्त्री
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकबाट नेपाललाई थप सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार विश्व बैंकको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा बैंकले नेपाललाई पुर्याउँदै आइरहेको सहयोगका निम्ति धन्यवाद दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले थप सहयोग आवश्यक रहेको बताएका हुन्। ‘विश्व...
काठमाण्डौ। विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्ममा विश्वका २० करोडभन्दा बढी मानिसले आफूले बसोबास गरिरहेको बासस्थान छाड्न बाध्य हुने अवस्था आउने जनाएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ग्राउन्डसवेल प्रतिवेदनको दोस्रो भागका अनुसार जलवायु परिवर्तनका लागि तत्कालै कुनै कदम नचालिए अबको ३ दशकसम्ममा २० करोडभन्दा बढी मानिस...
विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंकले रु. ५.७८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
काठमाण्डौ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि करिब ५ अर्ब ८७ करोड (५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एक समारोहका बीच नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी...
विश्व बैंकद्वारा अफगानिस्तानलाई वित्तीय सहायता रोक
काठमाण्डौ। विश्व बैंकले अफगानिस्तानलाई प्रदान गर्दै आइरहेको वित्तीय सहायतामा रोक लगाएको छ। तालिवानको शासनकालमा महिलाहरुको अवस्था र भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विश्व बैंकले आफुले प्रदान गर्दै आइरहेको वित्तीय सहायता रोकेको जनाएको हो। अफगानिस्तानमा यतिबेला खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुन सुरु भएको छ। त्यसमाथि वैदेशिक...
‘उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ का लागि विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
काठमाण्डौ । विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ का लागि ६० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७ अर्बबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र...
विश्व बैंकले नेपाललाई १० करोड डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने
काठमाण्डौ । विश्व बैंकले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त ऋण सहायता उपलब्ध प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। जसअनुसार विश्व बैंकले सरकारको स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५ करोड डलर र स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोत...
नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले रु. १७.७८ अर्ब सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने
काठमाण्डौ । कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अतिविपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (१५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। सहुलित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट...
विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई रु. १७.५५ अर्ब दिने
काठमाण्डौ । विश्व बैंकले महामारी प्रतिकार्य र पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई रु १७ अर्ब ५५ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ। कको कार्यकारी बोर्डले कोभिड–१९ को उत्थानशील पुनर्लाभ, अति जोखिममा परेकाको सुरक्षा र दिगो विकासमा सघाउन उक्त रकम आज स्वीकृत गरेको हो। “महामारीबाट सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव घटाउन प्रभावित जनसङ्ख्यालाई...
आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९% मात्र रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२१ को दोस्रो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो अनुमान गरेको हो। विश्व बैंकले नेपाल सरकारले गरेको अनुमानभन्दा करिब आधा कममात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले आगामी आव...
विश्व बैंकले कोभिड खोपका लागि नेपाललाई रु. ८.७० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने
काठमाण्डौ । कोभिड-१९ विरुद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व...
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । कोभिड–१९ को प्रभावसँगै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धि तथा बढ्नसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बैंकले कोभिडको खोप विकास र वितरणले भएको सहज गतिविधिका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको हो। विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार...
सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६%मा झर्ने विश्वको बैंकको प्रक्षेपण
काठमाण्डौ । विश्व बैंकले सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले बिहीबार दक्षिण एसियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपाल सरकारले भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक...
नेपालमा १० वर्षमा थप ४० लाख मानिसले रोजगारी पाए : विश्व बैंक
काठमाण्डौ । बितेको एक दशकको अवधिमा नेपालमा थप ४० लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन्। विश्व बैंकले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जब डाइग्नोस्टिक’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ देखि २०१८ को अवधिमा नेपालमा थप ४० लाखजनाले रोजगारी पाएका हुन्। अधिकांश रोजगारी ज्यालादारीमा सीमित रहेको उल्लेख रहेको प्रतिवेदनले ती कामदारहरुको क्षमताको...
‘कोरोनाका कारण विकासशील देशहरुमा कर्जाको समस्या बढ्यो’
काठमाण्डौ । विश्व बैंकका प्रमुख डेबिड मालपासले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विकासशील देशहरुको कर्जा समस्या बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मालपासले जी–२० राष्ट्रहरुका वित्तमन्त्रीहरुका साथ एउटा भर्चुअल मिटिङमा यस्तो चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। उनले सबैभन्दा गरिब देशहरुको कर्जाको अवस्था संकटको स्तरमा पुगेको बताए। उनले समूहका...